Mhirizhonga Yopararira muZimbabwe Yose
Nyaya yemhirizhonga munyika inonzi yave kuramba ichiparira zvinotyisa muzvimbo dzakawanda dzenyika kubva zvanzi munyika munogona kuitwa sarudzo gore rinouya.
Pachikoro cheGwangwawa Primary kuMashonaland Central varairidzi vatanhatu vanonzi vakatiza mushure mekuda kupambwa nevesangano revasori reCentral Intelligence Organization, CIO, vachinzi vainge vataura pakunyorwa kwebumbiro remitemo, asi ivo vakange vaudzwa kuti vasataure sezvainge zvakurudzirwa nevatsigiri veZanu-PF.
NeChitatu muHarare vatori venhau vakasanganawo kuQuill Club vakatenderana kuti vanyore tsamba kumutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamwe nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vachivakurudzira kuti vamise kusungwa kwevatori venhau.
MDC inoti mapurisa anofanirwa kumisa kushungurudzwa kwevanhu.
Mutauriri wevarairidzi vakatiza kuRushinga, VaJulius Mawarire, vanoti vava kugara vakahwanda nekutya maCIO.
Ukuwo kuMbare kunonzi kwakaitika mhirizhonga inotyisa neChitatu apo vatsigiri veZanu-PF vachitsigirana nechikwata chinozivikanwa kuti chipangano, vakarova nekudzinga vanofungidzirwa kuti vatsigiri veMDC kuMbare. Imba inorara vanotengesera zvinhu kuMbare yeCarter House inonzi yakatorwa nevatsigiri veZanu PF ava.
Vaimbove muuto Captain John Murukai veZanu-PF vanoti vanhu veMDC ndivo vakatanga hondo nekupanana misika izvo zvakapa kuti veZanu PF vatore matanho avakatora..
Hurukuro naVa Julius Mawarire
Hurukuro naVa John Murukai